Caqabad Dekedii Magaalada Berbera Ka Haysata Ganacsatada Xoolaha Dhoofisa Iyo Cabashada Ay Qabaan
(Hadhwanaagnews) Friday, January 12, 2018 00:21:35
Berbera(HWN):-Iyada oo uu wali xidhan yahay suuqii ugu weynaa ee loo iibgeyn jiray xoolaha somaliland ayaa hadana waxa shaqaynaya suuqyo aan laysku halayn karin oo ka furan wadamada Cumaan iyo Yemen.
Iyada oo ganacsiga xooluhu ay yihiin isha weyn ee ay somaliland ka hesho dhaqaalaha ayaa waxa taagan caqabado ka hor yimid oo ka jira dekeda magaalada Berbera.
Ganacsatada dhoofisa xoolaha ayaa cabasho ka muujinaya adeega dekeda magaalada Berbera, waxaanay caqabada ugu badani ka taagan tahay afar doonyood oo loo qorsheeyey inay qaadaan xoolo kuwaas oo waayey wiishashkii lagu saari lahaa xoolaha lagu rarayo, iyada oo xoolihiina
ay wali dhex tuban yihiin gudaha dekeda.
Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo la soo xidhiidhay Hadhwanaagnews ayaa sheegay in wish kaliya oo dekeda ka shaqaynayaa uu ku hawlan yahay markab u raran hay’adda WFP, iyaga oo sheegay inay ilaa hada la yihiin wiish ay ku raraan xoolihii ay dhoofin lahaayeen.
Mid ka mid ah ganacsatada xoolaha dhoofiya oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa ku calaacalay inay nasiib daro tahay in dekedii magaalada Berbera oo habeenada qaar laga rari jiray sadex boqol oo kun oo neef in caawa laga la yahay wax lagu raro laba kun iyo sadex boqol oo neef, waxaanu sheegay in mashaariicdii wax badsada ahaa ee dekedu ay noqdeen wax beel.
Sidoo kale ganacsatadan ayaa sheegay inay dacwad u gudbiyeen madaxda shirkada DP World u qaabilsan dekeda magaalada Berbera.